Tsy ho very vola ianao raha tsy miala. - Mike Ditka - Pedia Quotes
Tsy ho very vola ianao raha tsy miala. - Mike Ditka
Tsy misy fahamarinana lehibe kokoa noho ny hoe miasa mafy foana ny tombony azo avy aminy. Feno fahasahiranana ny fiainana. Mety tsy ho mora ny hahazoana izay tadiavinao na iandrasana anao. Tsy midika akory izany fa tokony hiala. Ny fitazonana faharetana sy ny fanohizana miasa mafy dia manampy amin'ny fanatrarana ny tanjonao.
Tsy diso anjara ianao raha tsy nahatratra ny tanjonao. Tena diso fanantenana ianao raha tsy miala. Mety hisy hieritreritra fa misy fetra ny habetsanao azonao atao. Fa ny marina dia mila manosika ny fetrantsika.
Mazava ho azy fa ny fandanjalanjana ny toe-javatra dia mila refesina, fa mila mahatakatra isika fa raha misy varavarana iray manidy varavarana iray hafa misokatra. Ny fikatsahantsika hanatratra zavatra dia tsy tokony ahena. Tokony ho afaka mitady fotoana vaovao isika amin'ny fotoana rehetra hahafahantsika mandroso eo amin'ny fiainana.
Ny zavatra heverinao ho fatiantoka dia dingana vitsivitsy amin'ny fiainana izay ho resinao tokoa raha manandrana ianao. Noho izany, aza kivy ny tenanao ary manandrata avo ny fanantenanao. Ny Optimism dia manentana antsika amin'ny angovo hanao tsara kokoa. Hitanay ny jiro amin'ny faran'ny tonelina ary manomboka miasa ho azy isika.
Aza avela hisy hilaza aminao hoe nisy very. Lazao azy ireo fa hahita fomba hivoahana ianao ary raiso ho fanamby ny fanaovana tsaratsara kokoa. ny Hiresaka feo mahery noho ny teny ny hetsika ary be dia be no hiandrandra anao noho ny ahay.
Quotes malaza momba ny fanandramana
Aza milavo lefona foana
Aza miala amin'izany
Aza avela hitsahatra
Quote momba ny fanandramana tsara indrindra anao
Mpandresy Vs Loser Quotes